Rivers Conservation Law
Rivers Conservation Rule
Warning for Navigation
Acting DG of DWIR
Functions of DWIR
Objectives of DWIR
DyDG of DWIR
TANDER No.(3)M&E/2020-2021
တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက်ပြောင်းလဲခြင်းကို အသိပေးအကြောင်းကြား ခြင်းကိစ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဝယ်ယူမည့် ပစ္စည်းများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း
သံလွင်မြစ်ကြောင်း သဲသောင်တူးဖော်ခြင်း Request For Porposal(RFP) တင်သွင်းခြင်းအား (၁၆-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့
ညနေ (၂:၀၀)နာရီတွင် နောက်ဆုံးထား တင်သွင်းကြရန်နှင့် တင်ဒါလျှောက်လွှာများအား ရောင်းချခြင်းမပြုတော့ပါကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် လေလံတင်ထုခွဲရောင်းချမည့် ပစ္စည်းများစာရင်း
၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဗ-၁၀၀၁ သောင်တူးရေယာဉ်အား လွန်းတင်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် လုပ်ငန်းရှင်/ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းများအား တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား တည်နေရာ
(က) ဗ-၁၀၀၁ သောင်တူးရေယာဉ်လွန်းတင် ပြင်ဆင်ခြင်း IWT လွန်းကျင်း၊ စစ်တွေမြို့
၂။ တင်ဒါပုံစံရောင်းချခြင်း - ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်၊ အမှတ်(၄၀၀)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
တင်ဒါတင်သွင်းခြင်းနှင့် - ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စိစစ်ရွေးချယ်မည့်နေရာ ရုံးချုပ်၊ အမှတ်(၄၀၀)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်ရက် - (၁၁-၅-၂၀၂၀)
တင်ဒါလျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်/အချိန် - (၂၅-၅-၂၀၂၀) (၁၆း၀၀) နာရီ
နည်းပညာအဆိုပြုလွှာတင်ရမည့် - (၂၆-၅-၂၀၂၀) (၁၆း၀၀) နာရီ
တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့် ရက်/အချိန် - (၂၇-၅-၂၀၂၀) (၁၃း၀၀) နာရီ
၃။ နည်းပညာအဆိုပြုလွှာ (Technical Specification Proposal) အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်း ကိုက်ညီမှုရှိသည့် ကုမ္ပဏီများကိုသာ ငွေကြေးအဆိုပြုလွှာ Financial Proposal ဖွင့်ဖောက်၍ ဈေးနှုန်း စိစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းယန္တရားဌာန၊ ဖုန်း - ၀၁-၈၂၉၂၂၃၆, ၀၁-၈၂၀၃၅၅၃ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Works and Operation Service
(Extraction of Sand in Thanlwin River)
Employer: Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems (DWIR)
Project: Sand Extraction Project in Thanlwin River
Contract title: DWIR-CW01: Extraction of Sand in Thanlwin River
Country: The Republic of the Union of Myanmar
Issued on: 19 March, 2020
1.The Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems (DWIR) of the Ministry of Transport and Communications, acting on behalf of the Government of the Republic of the Union of Myanmar intends to select an eligible and qualified Proposer for award ofathree (3) year sand extraction license beginning May 2020 to extract sand in the Thanlwin River between Hpa-An and Mawlamyine stretch. The objective of this assignment is to improve the river channel by dredging or extracting sand in the river to mitigate annual flooding.
2.The DWIR now invites sealed Proposals from interested eligible Proposers for the extraction of sand in Thanlwin River at three (3) places in upstream of Hpa-An and one (1) place downstream of Hpa-An. Further details about location and sounding chart including alignment and estimated cubic meter for the sand extraction in river channel can be obtained from the address below. Interested Proposers are required to have following specific experience and capabilities:
a) Financial Capabilities: The Proposer must demonstrate access to, or availability of, financial resources such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means, to meet dredging cash flow requirements estimated as USD 1 Million, net of the Proposer’s other commitments.
b) Sand Extraction Experience: Between 1st January 2015 and proposal submission deadline (ie5years), asaprime sand extraction contractor, joint venture member, management contractor or sub-contractor, completion ofaminimum number of One (1) similar contract or aggregation of contracts or sale of extracted sand in any year of minimum value USD3Million.
The Proposer must demonstrate ownership or access to the following list of equipment:
i) CSD Backhoe Dredger,
ii) Trailing Suction Hopper Dredger (Shallow Draught)
iii) Grab Dredger
iv) Water Injection Dredger
Further details are given in the Request for Proposal Documents.
It is expected that the Request for Proposals documents will be available on 25 March 2020 and the most qualified Proposer will be selected beginning May 2020.
3. The procurement will be conducted through national competitive procurement using this Request for Proposals (RFP) and Government of the Republic of the Union of Myanmar procurement regulations.
4. Interested eligible Proposers may obtain further information from the address below and inspect the RFP Document during office hours 9:00 AM to 5:00 PM at the address given below.
5. The RFP Document in English shall be obtained from the office of DWIR by interested eligible Proposers upon the submission ofawritten application to the address below.
6. A single-stage, two envelope RFP process will be used, and the Proposal will consist of (i) the Technical Part, without any reference to prices; and (ii) the Finnacial Part, as detailed in the RFP Document. The Technical and Financial Parts of the proposals shall be submitted simultaneously in two separate sealed envelopes.
7. The Proposal, both the Technical Part and the Financial Part, must be delivered to the address below on or before 2:00 pm local time on 10th April 2020 . Electronic Procurement will not be permitted. Late Proposals will be rejected. The Technical Part of the Proposals will be publicly opened in the presence of the Proposers’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below 2:00 pm local time on 10th April 2020. The Financial Part shall remain unopened and will be held in safe custody of the Employer until the second public opening of the Financial Part, following the evaluation of the Technical Part of the Proposals.
8. All Proposals must be accompanied byaProposal-Securing Declaration
The address (es) referred to above is (are): Agency: DWIR
Name: Mr. Maung Maung Naing, Director, Waterways Conservation Department,
Address: No.400., Lower Pazundaung Road, Pazundaung, Yangon
Telephone: +95-(0)1-292961, Fax: +95-(0)1-290230, Postal code 11171,Website: www.dwir.gov.mm
၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါရေယာဉ်ရှိ Main Engine & Gear Box အသစ်လဲလှယ်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ရန်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်/ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း များအား တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Exchanging of Engine , Gear Box & Foundation for Pa-63 Vessel
ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်၊ အမှတ် (၄၀၀)၊အောက်ပုဇွန် တောင်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်၊ အမှတ် (၄၀၀)၊အောက်ပုဇွန် တောင်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့် ရက်/အချိန် -
၃။ နည်းပညာအဆိုပြုလွှာ (Technical Specification Proposal) အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်း ကိုက်ညီမှုရှိသည့် ကုမ္ပဏီ များကိုသာ ငွေကြေးအဆိုပြုလွှာ Financial Proposal ဖွင့်ဖောက်၍ဈေးနှုန်း စိစစ်ခြင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းယန္တရားဌာန၊ ဖုန်း- ၀၁-၂၉၂၂၃၆၊ ၀၁-၂၀၃၅၅၃ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းပေးခြင်း စီမံကိန်းအပိုင်း-၂နှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း(၅-၂-၂၀၂၀)
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန တို့၏
ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနား ကို (၁၇-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၌ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာနမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါရေယာဉ်(၂)စီးရှိ Main Engine & Gear Box အသစ်လဲလှယ်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်/ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းများအား တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါသည်-
Exchanging of Engine , Gear Box & Foundation for Paka-32 Vessel
ရေကြောင်းယန္တရားဌာနလွန်းကျင်း ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့
ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်၊ အမှတ် (၄၀၀)၊ အောက် ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
၃။ နည်းပညာအဆိုပြုလွှာ (Technical Specification Proposal) အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်း ကိုက်ညီမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီများကိုသာ ငွေကြေးအဆိုပြုလွှာ Financial Proposal ဖွင့်ဖောက်၍ဈေးနှုန်း စိစစ်ခြင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ အသေးစိတ်အချက်လက်များကို ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းယန္တရားဌာန၊ ဖုန်း- ၀၁ ၂၉၂၂၃၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းစုံစမ်း မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
Feasibility Study for Myanmar Wan Pong Port Improvement Project
for Interim Report Workshop and Japan SAR Knowledge Sharing Program
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
Myanmar Shipyards-AMECC JV Co;Ltd ၏ လွန်းကျင်း ရေ လှောင်ကန်အတွင်း သောင်တူးလုပ်ငန်း
မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း (ဆင်မလိုက်)၊ တန်ချိန် ၁၂၀၀၀ လွန်းကျင်း အဝ သောင်တူးလုပ်ငန်း
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရေယာဉ်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-
ဧရာဝတီမြစ် (မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော်၊ ကသာ၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ ညောင်ဦး၊ ချောက်၊ မင်းဘူး၊ မကွေး၊ အောင်လံ၊ ပြည်၊ ဟင်္သာတ) ချင်းတွင်းမြစ် (ခန္တီး၊ ဟုမ္မလင်း၊ မော်လိုက်၊ ကလေးဝ၊ မုံရွာ) မြို့များမှ မြစ်ရေမှတ်များကို စုစည်း၍ သုတေသနနှင့်စီမံကိန်းဌာန၏ အချက်အလက်ဘဏ်သို့ နေ့စဉ်ထည့်သွင်းပါသည်။
ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ်၊ သံလွင်မြစ်၊ စစ်တောင်းမြစ်၊ ပဲခူးမြစ်၊ မြစ်ငယ်မြစ်နှင့် ငဝန်မြစ်တို့မှ မြစ်ရေမှတ်များကို နေ့စဉ်စုစည်း၍ Hydrograph များရေးဆွဲပြီး ဒေသ/ဒေသခွဲရုံးများသို့ အပတ်စဉ် ပေးပို့ပါသည်။
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ ပေးပို့သော ဧရာဝတီမြစ် (ညောင်တုန်းနှင့် ပြည်) တို့မှ ရေနမူနာများအား ရေအရည်အသွေးစမ်းသပ် စစ်ဆေး ၍ စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိပါသည်။
ပုသိမ်၊ မုံရွာ၊ ယမားချောင်း၊ ကလေးဝ၊ ဟုမ္မလင်း၊ မန္တလေး၊ ပခုက္ကူ၊ ချင်းတွင်းဝ၊ မကွေး၊ ပြည်တို့တွင် ရေအရည်အသွေးတိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဟင်္သာတ၊ မုံရွာ၊ မန္တလေး၊ ချင်းတွင်းဝ၊ ပြည်၊ မကွေး တို့တွင် သဲနုန်းတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
၁။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအိမ်ရာနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငှား အိမ်ရာ တည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ မြို့ပတ်လမ်း နှင့် ရတနာမဉ္ဇူလမ်းအကြားရှိ မြေဧရိယာ (၃၂) ဧကပေါ်တွင် (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည် ထောင်စု ငွေလုံးငွေရင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် (၁၂)ခန်းတွဲ (၅) ထပ် အဆောက်အဦ (၅) လုံး အခန်းပေါင်း (၃၀၀) တည်ဆောက် ပြီးစီးပြီ ဖြစ်၍ အငြိမ်းစားယူပြီး အမှုထမ်းဝန်ထမ်းများအနက် ပူးတွဲ(က)ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများကို အငှားချထားပေးရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခန်းနေရာချထားရေး ကော်မတီ သို့ ပေးပို့လာသည့် အမည်စာရင်းများကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအငှားအိမ်ရာ တည်ဆောက်ရေးဦးစီးကော်မတီသို့ တင်ပြ အတည်ပြုချက် ရယူပြီး နေထိုင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကြောင်းပြန်ကြားသွား မည် ဖြစ်ပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လိပ်မူပါ ဌာနများအနေဖြင့် အငြိမ်းစား အငှားအိမ်ရာ လျှောက်ထားလိုသူများသည် ပူးတွဲ(ခ) ပါလျှောက်လွှာပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်၍ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးသို့ ပေးပို့ပါရန် အကြောင်း ကြားလာပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသူ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအားလုံး လျှောက်လွှာများကို အမြန်ဆုံး ပေးပို့နိုင်ပါ ရန် အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ
လုပ်ငန်းခွင်ဆွေးနွေးပွဲအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၀) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို (၂၄-၁-၂၀၂၀) တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ညောင်တုန်းမြို့၊ (၂၂) လမ်းထိပ်၊ ကမ်းနားလမ်း
တာ အိကျမှု ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း(၁၉-၁-၂၀၂၀)
ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ညောင်တုန်းမြို့၊ (၂၂) လမ်းထိပ်၊ ကမ်းနားလမ်း
တာ အိကျမှု ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း(၁၃-၁-၂၀၂၀)
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်း များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်ဆွေးနွေးပွဲအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၀) ကို ဤဦးစီးဌာနမှ သင်တန်းသား/သူ (၂၀)ဦးနှင့်
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒမှ သင်တန်းသား/သူ (၃) ဦး ဖြင့်(၁၄-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
(၁၇)ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းမိသားစု မဟာဘုံကထိန်
တွံတေးတူးမြောင်းဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု
ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာအပေါ် အကြံပြုချက်များအား အမှတ်(၄၀၀)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်
သို့လည်းကောင်း၊ ၁၄-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့နောက်ဆုံး ထား၍ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ link မှ download ရယူနိုင်ပါသည်။
ဒေသ (၁၂) ၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး၏ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Notification of Mandalay Port Project 2017
Download Notification of Mandalay Port Project- English (29.5.2017)
Download Notification of Mandalay Port Project-Myanmar (29.5.2017)
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၃) ရက်နှင့် (၁၄) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ကမ္ဘာ့ရေနေ့အခမ်းအနားတွင် ချမှတ်ခဲ့သည့် Key Messages
Ayeyarwaddy Integrated River Basin Management (AIRBM) Project
(Credit No. 55590 MM)
Ministry of Transport invites expression of interest from qualified candidates for the following assignments.1) National Procurement Expert,2) National Finance Expert and 3) National environmental and social Expert.
The Ministry had put out an announcement for the above mention post, on 26-5-2015 in The Global New Light of Myanmar and The Daily mirror newspapers. Those who had previously submitted their "REOI" for the said assignment need not sent their application for they are still valid and will be taken into consideration.
Further information andacopy of the detailed Terms of Reference (TORs) can be looked up in www.dwir.gov.mm (Search for International Cooperation World Bank) www.moezala.gov.mm and UNDB online website.